Ch 2 maka – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaMako / Ch 2 maka
2:1 Uye pashure pemazuva, iye zvakare akapinda muKapenaume.
2:2 Uye zvikanzwikwa kuti ari mumba. Uye vazhinji vakaungana kuti pakanga pasina nzvimbo vakasiya, kunyange pamukova. Akataura shoko kwavari.
2:3 Uye vakauya kwaari, vakaisa wakange akafa mitezo, akanga akatakurwa navarume vana.
2:4 Zvino vakati vasingagoni kundomukumikidza kwaari nekuda kwechaunga, vakapfurunyura denga paakange ari. Uye rokuizarura, Ivo kutura vakaburusira pakamubhedha akanga akaoma rutivi rwomuviri akanga avete.
2:5 ndokubva, apo Jesu akanga aona kutenda kwavo, akati kune wakange akafa mitezo, "Mwanakomana, zvivi zvako zvaregererwa. "
2:6 Asi vamwe vevanyori vakanga vagere munzvimbo iyoyo uye kufunga mumwoyo yavo:
2:7 "Munhu uyu anotaura nenzira iyi? Ari kumhura. Ndiani unogona kukangamwira zvivi, asi Mwari oga?"
2:8 Kamwe chete, Jesu, vachiziva mumweya wake kuti vakanga vachifunga ichi mukati mavo, akati kwavari: "Seiko muchifunga zvinhu izvi mumwoyo yenyu?
2:9 Ndezvipiko zvakareruka, kuti kune wakafa mitezo, 'Zvivi zvako zvaregererwa,'Kana kutaura, 'Simukai, tora rukukwe rwako, uye famba?'
2:10 Asi kuti muzive kuti Mwanakomana wemunhu une simba panyika rekukangamwira zvivi,"Akati kuna akanga akafa mutezo:
2:11 "Ndinoti kwamuri: Simukai, tora rukukwe rwako, uende kumba kwako. "
2:12 Pakarepo akasimuka, ndokusimudza pakamubhedha ake, akaenda kure pamberi pavo vose, zvekuti vose vakashamisika. Ivo akaremekedza Mwari, nokutaura, "Hatina kumboona chinhu chakadai."
2:13 Zvino akaendazve gungwa. Zvino yose vazhinji vakauya kwaari, Akavadzidzisa.
2:14 Uye sezvo akanga achipfuura, akaona Revhi waArifiyosi, agere tsika hofisi. Akati kwaari, "Nditevere." Achisimuka, iye akamutevera.
2:15 Zvino kuti, agere pakudya mumba make, vateresi vazhinji nevatadzi vakagarawo pakudya pamwe naJesu nevadzidzi vake. Nokuti avo vaimutevera vazhinji.
2:16 Zvino vanyori nevaFarisi, achiona kuti akadya nevateresi nevatadzi, akati kuvadzidzi vake, "Sei mudzidzisi wenyu achidya nokunwa nevateresi nevatadzi?"
2:17 Jesu, wakati anzwa izvi, akati kwavari: "The utano havatsvaki chiremba, asi vaya vane vachinetseka kuita. nekuti handina kuuya kuzoshevedza akarurama, asi vatadzi. "
2:18 Uye vadzidzi vaJohwani, uye vaFarisi, vaitsanya. Uye vakasvika vakati kwaari, "Sei vadzidzi vaJohani navaFarisi tichitsanya, asi vadzidzi venyu vasingatsanyi?"
2:19 Zvino Jesu akati kwavari: "Sei vanakomana muchato dzitsanye murume achiri navo? Munguva chero nguva vane chikomba navo, havagoni kutsanya.
2:20 Asi mazuva achasvika apo chikomba chichabviswa kwavari, uye idzo dzichabva dzatsanya, mumazuva iwayo.
2:21 Hakuna munhu anoisa chigamba chitsva jira pana sharu. zvimwe, kuwedzera itsva racho rose ringakweva kubva kare, uye misodzi kwakaipa.
2:22 Uye hakuna unodira waini itsva muhombodo tsaru dzewaini. zvimwe, waini ichaputitsa dzewaini, uye waini achadurura, uye dzewaini richaparara. pachinzvimbo, waini itsva inofanira kuiswa muhombodo itsva dzewaini. "
2:23 uye zvakare, apo Jehovha akanga achifamba kuburikidza akaibva zviyo paSabata, vadzidzi vake, sezvo ivo advance, vakatanga kutanha hura tsanga.
2:24 Asi vaFarisi vakati kwaari, "Tarirai, seiko vachiita zvisingatenderwi nomusi weSabata?"
2:25 Akati kwavari: "Hamuna kumboverenga here zvakaitwa naDhavhidhi, musi waakange ashaiwa, ava nenzara, iye nevakange vanaye?
2:26 Kuti wakapinda sei mumba maMwari, pasi muprista Abhiatari, akadya zvingwa zvokuratidza, izvo zvakanga zvisiri pamutemo kudyiwa, kunze kwevapristi, uye sei akapa vaaiva naye?"
2:27 Akati kwavari: "Sabata rakaitirwa munhu, uye murume haana kuti Sabata.
2:28 uye saka, Mwanakomana wemunhu ndiIshe, kunyange weSabata. "